Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango ePennsylvania 2022
Uluhlu kunye neenkcukacha zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango ePennsylvania zinikezelwe kule posi yebhlog ukunceda ukuququzelela ukwamkelwa kwakho kwizikolo zemed kulo mmandla.
Ukuba ungumhlali wengingqi yasePennsylvania okanye ucinga ukuya phaya kwizifundo zonyango, uya kulifumana eli nqaku liluncedo kakhulu kwisicelo sakho sokwamkelwa kwizikolo eziphakathi. Kwakhona, ukuba awukayicingi, ungaqala ukwenza njalo ngoku, njengoko iPennsylvania inezinye zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eUnited States eziqinisekisiweyo zokubonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi.
Siza kuvavanya zonke izikolo zonyango ePennsylvania apha ukuba ukhethe esona silungele wena kodwa ngaphambi kokungena kuloo nto, jonga ii-FAQ ezingezantsi.
1 Yimalini isikolo sezonyango ePennsylvania?
2 Ngaba iPennsylvania inezikolo ezifanelekileyo zonyango?
3 Zingaphi izikolo zonyango ePennsylvania?
4 Ngaba iPennsylvania inesikolo sezonyango sikarhulumente?
5 Ezona zikolo ziBalaseleyo zeZonyango ePennsylvania
5.1 1. IPerelman School of Medicine
5.2 2. Isikolo sikaLewis Katz seyeza
5.3 3. IYunivesithi yasePittsburgh School of Medicine
5.4 4. ISidney Kimmel Medical College
5.5 5. I-Drexel University College yezoNyango
5.6 6.Ikholeji yaseLake Erie yeOsteopathic Medicine (LECOM)
5.7 7. IGeisinger Commonwealth School of Medicine
6 Izikolo zexabiso eliphantsi ze-5 zeZonyango ezisePennsylvania
6.1 # 1 iYunivesithi yaseDrexel yeYunivesithi yamayeza
6.2 # 2 IYunivesithi yaseTempileni
6.3 # 3 iYunivesithi yasePennsylvania State-ikholeji yamayeza
6.4 # 4 IYunivesithi yasePittsburg
6.5 # 5 IYunivesithi yasePennsylvania State University of Medicine
7 Ukuhlawulwa kweZonyango kunye neZikolo zokufaka iikhowudi ePennsylvania
8 Uluhlu lwazo zonke iZikolo zezoNyango ePennsylvania
Yimalini isikolo sezonyango ePennsylvania?
Iindleko zesikolo sezonyango ePennsylvania ziyahluka ngokwamacandelo ezonyango ofuna ukungena kuwo, uhlobo lomfundi olulo (nokuba ungumfundi wamazwe aphesheya okanye wasekhaya), kunye nesikolo semed ngokunjalo.
Nangona kunjalo, iindleko zesikolo sezonyango ePennsylvania ziphakathi kwe- $ 52,049 kunye ne- $ 59,910 yabafundi basekhaya okanye abaseburhulumenteni ngelixa abafundi bamazwe aphesheya okanye abangaphandle, amabakala aphakathi kwe- $ 55,121 kunye ne- $ 70,212 ngonyaka.
Ngaba iPennsylvania inezikolo ezifanelekileyo zonyango?
I-Pennsylvania ngokuqinisekileyo inezikolo ezilungileyo zonyango eziza kukubonelela ngamava ezonyango kwaye zikuqeqeshe ukuba ube ngugqirha ofanelekileyo. Ezinye zezikolo zonyango zibandakanya iDrexel University College of Medicine, iSidney Kimmel Medical College, iLewis Katz School of Medicine, kunye nezinye.
Zingaphi izikolo zonyango ePennsylvania?
Kukho izikolo zonyango ze-14 ePennsylvania
Ngaba iPennsylvania inesikolo sezonyango sikarhulumente?
Ewe, iPennsylvania inesikolo sezonyango- iPenn State College of Medicine.
Ngokucacileyo ngolandelelwano, lixesha elifanelekileyo lokuba siye kumxholo ophambili…
Ezona zikolo ziBalaseleyo zeZonyango ePennsylvania
Ezi zilandelayo zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango ePennsylvania kunye neenkcukacha zazo;
1. IPerelman School of Medicine
IPerelman School of Medicine, eyaziwa ngokuba yiPenn Med, sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yasePennsylvania- isikolo seIvy League- kwaye sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango ePennsylvania, ukuba ayisiyiyo eyona ibalaseleyo kwingingqi. Isikolo sezonyango sasekwa kwi-1765 kwaye sesona sikolo sezonyango sidala eMelika.
UPenn Med ubonelela ngemfundo eyahlukeneyo enje ngoKhathalelo oluBalulekileyo, i-Neurosurgery, iRadiation Oncology, iDermatology, iPediatrics, i-Ethics yezoNyango, kunye noMgaqo-nkqubo wezeMpilo, i-Anesthesiology, i-Ophthalmology, iOrthopedic Surgery, i-Psychiatry, i-Obstetrics kunye ne-Gynecology, i-Pharmacology, kunye nokunye. Ezi zifundo zifundiswa kuso nasiphi na kwizibhedlele ezine eziphambili zokufundisa esikolweni: Isibhedlele seDyunivesithi yasePennsylvania, iZiko lonyango lasePenn Presbyterian, iSibhedlele sasePennsylvania, kunye neSibhedlele saBantwana sasePhiladelphia.
2. Isikolo sikaLewis Katz seyeza
Isikolo sikaLewis Katz sezoNyango sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseTempileni, esasekwa e1901 kwaye samkelwa phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango ePennsylvania ngenxa yeempumelelo zayo ezininzi ezinjengokuba ngowokuqala ukususa i-HIV kwiiseli zomntu phakathi kwamanye amanqanaba kunye nempumelelo.
Ikholeji yezonyango ibonelela ngeenkqubo kwi-MD, MA, iinkqubo ezidibeneyo (MD / MA, MD / Ph.D.), UMncedisi kaGqirha, iPost-baccalaureate, kunye neNkqubo yokuNyanga amaNqaku. Abafundi banikwa amava okufunda ngezandla kwesinye sezibhedlele ezininzi ezisebenzisana nesikolo saseKat.
3. IYunivesithi yasePittsburgh School of Medicine
Eyaziwa ngokuba yiPitt Med kwaye yamkelwe kwilizwe lonke ngempumelelo yayo kuphando lwezinto eziphilayo, sesinye sezikolo zonyango ePennsylvania. Ngokubambisana neYunivesithi yasePittsburgh Medical Centre, abafundi banako ukufumana izakhono ezininzi kunye nolwazi lwezonyango zanamhlanje kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji yokusika ekusebenziseni unyango.
Njengazo zonke izikolo zonyango ezikolu luhlu, iYunivesithi yasePittsburgh, iSikolo sezoNyango sikhuphisana kakhulu, sifuna amanqaku aphakathi kwe-MCAT ye-517 nge-avareji yeGPA ye-3.86. Isikolo sigubungela zombini inkqubo yezonyango, sinika ugqirha wamayeza, kunye neenkqubo zokuthweswa isidanga, sinika ugqirha wefilosofi kunye needigri zemasters kwiindawo ezininzi zesayensi ye-biomedical science, uphando lweklinikhi, imfundo yezonyango kunye nemfundo yezonyango.
4. ISidney Kimmel Medical College
Eyasungulwa ngo-1824 kwaye esinye sezona zikolo zonyango ezindala e-United States, iSidney Kimmel Medical College sisikolo sezonyango saseYunivesithi yaseThomas Jefferson. Ngenkqubo yezonyango esandula ukwakhiwa, eyilelwe ukuhlangabezana neemfuno zecandelo lonyango langoku, ukuxhobisa abafundi ngezinto ezisisiseko zamayeza emva koko babanike imfundo esebenzayo ekufundiseni izibhedlele ukuze babalasele ngokupheleleyo izakhono zabo.
5. I-Drexel University College yezoNyango
Yaziwa njengesikolo sokuqala kwezonyango e-US kwabasetyhini nakwikholeji yokuqala ye-homeopathy kweli lizwe, iDrexel University College of Medicine sesinye sezikolo zonyango ePennsylvania. Yayisungulwa kwi-1848 kwaye ibonelela ngemfundo esemgangathweni yezonyango eyilelwe ukuqeqesha oogqirha bexesha elizayo kwisayensi nakwizobugcisa beyeza. Abafundi bezonyango eDrexel bafunda ukudibanisa itekhnoloji yokusika kunye nelona nqanaba liphezulu lemfesane ekusebenziseni amayeza.
I-Drexel University College yezoNyango isenokungabi nokhuphiswano njengezinye izikolo zonyango kolu luhlu njengoko sisikolo sesibini esisetyenziswa kwezonyango e-US.
6.Ikholeji yaseLake Erie yeOsteopathic Medicine (LECOM)
Eyasungulwa ngo-1992 njengesikolo sabucala esiphumeleleyo seyeza, i-dentistry, kunye nekhemisi ekunikezeni iidridi kwiyeza le-osteopathic (DO), i-pharmacy (i-PharmD) kunye ne-dentistry (i-DMD), kunye ne-degree degrees kwi-Health Services Administration, i-Biomedical Sciences kunye nezoNyango Imfundo. Isikolo sezonyango sinikezela ngenkqubo ekhawulezileyo yeminyaka emithathu yekhemesti kunye nenkqubo yemfundo emgama.
Ngaphezulu kwe-2,200 ebhalise abafundi bezonyango, Ikholeji yeOsteopathic Medicine e-LECOM sesona sikolo sonyango sikhulu eUnited States. Ukhuphiswano apha aluphakanyanga nokuba ungafuna ukuqaphela ukufaka isicelo apha ukuze ufumane ulwazi kunye nezakhono zonyango.
7. IGeisinger Commonwealth School of Medicine
Esi sesinye sezikolo ezizimeleyo zonyango ePennsylvania, isekwe kwi-2008 kwaye inxulunyaniswa neNkqubo yezeMpilo yeGeisinger kwaye ikumantla mpuma nakumantla embindini wePennsylvania. Isikolo sibonelela ngemodeli esekwe ekuhlaleni yemfundo yezonyango kwaye sikwabonelela ngeNkqubo yoGqirha kwezeMithi (MD) kunye neNkqubo yeBiomedical Science (MBS).
Ukwamkelwa apha akukhuphisani kakhulu nemfuno ye-MCAT ye-511 kunye ne-GPA ephakathi ye-3.66.
Ezi zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango ePennsylvania kwaye oku kukwathetha ukuba baya kukhuphisana kwaye babize. Nokuba kunjalo, ndenze uluhlu lwezona zonyango zibiza imali encinci ePennsylvania ezinokufikeleleka kuwe. Qhubeka ufunda!
Izikolo zexabiso eliphantsi ze-5 zeZonyango ezisePennsylvania
Oku kulandelayo zizikolo zonyango ezingabizi kakhulu ePennsylvania ezidweliswe kungekho myalelo uthile:
# 1 iYunivesithi yaseDrexel yeYunivesithi yamayeza
Kuluhlu lwethu oluphezulu lwezona zonyango zibiza ixabiso eliphantsi ePennsylvania yiDrexel University, iKholeji yezoNyango, kwaye ikwadweliswa apha ngasentla phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango ePennsylvania. Kuyamangalisa ukuba umrhumo wesikolo esinjalo ungabizi kakhulu kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa sisikolo sesibini esisetyenziswa kakhulu kunyango kwisizwe.
Imali yokufunda eqikelelweyo ngonyaka kwisikolo i-Drexel med yi- $ 30,000.
# 2 IYunivesithi yaseTempileni
Umahluko wemali yokufunda phakathi kweTempile kunye neDrexel inkulu okanye kubonakala ngathi iDrexel itshiphu ngokwenene kwaye yenza iTempile ibonakale ngathi inomsindo. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nezinye izikolo zonyango elizweni uyakubona ukuba iindleko zeYunivesithi yeTempile ayisiyonto imbi ngolo hlobo.
Isikolo sikaLewis Katz sezoNyango sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yeTempile, kwaye apha, abahlali, oko kukuthi, abahlali abasisigxina kunye nabemi basePennsylvania bahlawula imali eqikelelweyo ye- $ 55,000 ngonyaka kwimirhumo yokufunda. Ngelixa abangahlaliyo kunye nabafundi bamanye amazwe bahlawula imali eyi- $ 58,000 ngonyaka.
# 3 iYunivesithi yasePennsylvania State-ikholeji yamayeza
Kubonakala ngathi ukusuka apha kwimirhumo yokufunda kuya kubakho kwii-50ks nangaphezulu kwaye ngokunyanisekileyo, zisabiza ixabiso eliphantsi. Abanye baqala ukusuka kwi-80ks ukuya kwi-100ks, ke, olu luhlobo lwexabiso eliphantsi. Imali yokufunda yabafundi bezonyango apha yi- $ 52,000 ngonyaka.
# 4 IYunivesithi yasePittsburg
IPitt Med, njengoko isikolo sonyango apha sibizwa njalo, sesinye sezona zikolo zibalaseleyo nezinexabiso eliphantsi ePennsylvania. Qho ngonyaka, abafundi bezonyango abangabahlali bahlawula iindleko eziqikelelweyo ze- $ 59,000 kwaye abangengabo abahlali bahlawula i-62,000 yeedola.
# 5 IYunivesithi yasePennsylvania State University of Medicine
Ikholeji yasePenn State yoNyango sesinye sezona zikolo zibiza ixabiso eliphantsi ePennsylvania kwilizwe liphela, ivumela abafundi abaseburhulumenteni kunye nabangaphandle ukuba bahlawule iindleko ezifanayo. Imali yokufunda apha yi- $ 50,534 ngonyaka.
Ke, ezi zezona zikolo zibiza ixabiso eliphantsi ePennsylvania, ndithembe, azibizi kakhulu njengezinye izikolo zonyango oluphezulu kwaye zisakunika imfundo esemgangathweni yezonyango kwicandelo lakho elikhethekileyo.
Ukuhlawulwa kweZonyango kunye neZikolo zokufaka iikhowudi ePennsylvania
Ukuhlawula iindleko zonyango kunye nokufaka iikhowudi yinkqubo yokuchonga isifo, iimvavanyo zonyango, unyango kunye neenkqubo ezifumaneka kumaxwebhu ezonyango kwaye emva koko ukhuphele le datha yesigulana kwiikhowudi ezisemgangathweni ukuhlawulisa urhulumente kunye nabahlawuli bezorhwebo kwimbuyekezo yogqirha.
Inkqubo yokuhlawula kunye neyokwenza iikhowudi inokugqitywa kwiminyaka emine ngokufumana isidanga se-bachelor okanye iinyanga ezilithoba ukuya kunyaka omnye ukuba uthatha isigqibo sokuthatha isatifikethi okanye inkqubo yediploma kwikhosi. Kukwakho nenkqubo yesidanga sokudibana kwikhosi yezonyango kunye neyokuhlawula ethatha iminyaka emi-2 ukuyigqiba.
Iikhowudi zonyango zisebenza noogqirha abanelayisensi kwaye zinokuba yinto elungileyo kubantu abangenako ukuyenza kwisikolo semed. Ngalesi sakhono unokufumana isixa semali esikhulu ngonyaka, ukusukela kwi- $ 42,000 ukuya kwi- $ 64,900, ekuphakameni isidanga sakho, wona umvuzo wakho uphezulu, ke, unokufuna ukufumana isidanga se-bachelor senkqubo kwaye ufumane ngaphezulu.
Apha ngezantsi luluhlu oluhlanganisiweyo lokuhlawulwa kwezonyango kunye nezikolo zokufaka iikhowudi ePennsylvania ezinokuba nomdla wokufaka isicelo sakho.
Ikholeji yasePennsylvania yeTekhnoloji
IZiko leMisebenzi yaseKaplan
IZiko lobuGcisa eKeystone
Ikholeji yaseLuzerne County Community
Ikholeji yoLuntu yaseMontgomery County
IZiko lobuGcisa lasePittsburgh
I-Westmoreland County Community College
IZiko lobuGcisa laseLaurel
Ikholeji yoLuntu yaseLehigh Carbon
Iziko laMaziko oNyango
Ikholeji yoLuntu yaseDelaware County
IBerg Technical Technical Institute
Isikolo seMcCann seShishini neTekhnoloji
Isikolo seShishini saseLansdale
KwiKholeji yoLuntu yaseNorthampton County
Indawo yokufunda yeKholeji yoLuntu
Amanye ala maziko abonelela ngemfundo ekwi-intanethi kunye nasemgama yokuhlawulisa kunye neenkqubo zokufaka iikhowudi. Unokuthatha isigqibo sokulandela idiploma, isatifikethi, isidanga sokudibana, okanye isidanga sebhatshela kwinkqubo, nokuba yeyiphi na ekusebenzela ngcono.
Ngaphambi kokufaka isicelo sale nkqubo kufuneka ube ugqibile kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye wazuza idiploma yakho okanye i-GED kwikhosi yesayensi enje ngebhayoloji, ikhemistri, ifizikiki, ngamanye amaxesha nezibalo. Ukuze ube ngumhlawuli welayisensi yezonyango kunye nekhowudi, kuya kufuneka uthathe uviwo oluya kuvavanya ubuchule kunye nolwazi lwakho, ukuba ufumana amanqaku anelisayo emva koko unokufumana iphepha-mvume lakho.
Uluhlu lwazo zonke iZikolo zezoNyango ePennsylvania
Zonke izikolo zonyango ePennsylvania zezi:
Isikolo seAtlantic seOsteopathy
I-Drexel College of Medicine
Isikolo seGeisinger Commonwealth School of Medicine
Ikholeji yezoNyango yase-Pennsylvania
Ikholeji yaseJefferson Medical
Isikolo sikaLewis Katz seyeza
IYunivesithi yasePittsburgh School of Medicine
IYunivesithi yasePhiladelphia yeOsteopathic Medicine
Isikolo seFiladelfiya seAnatomy
IYunivesithi yasePenn Medical
IYunivesithi yasePenn State University of Medicine
Zonke ezi zizikolo zonyango ePennsylvania, kwaye ukuba ufuna ngaphezulu, unokufuna ukujonga ezi ngcebiso zingezantsi.
Izikolo eziPhezulu ze-10 zoNyango ePhiladelphia | Isimahla kwaye ihlawulwe
Iinkqubo ezingama-25 + eziQinisekisiweyo zeNkqubo yokuNcediswa kwezoNyango ngeSatifikethi
Unokuba kanjani nguMncedisi kwezonyango
ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango ePennsylvaniaIzikolo zonyango ezingabizi kakhulu ePennsylvaniauluhlu lwazo zonke izikolo zonyango ePennsylvaniaiikhowudi zonyango kunye nezikolo zokuhlawula ePennsylvaniaIzikolo zonyango ePennsylvania
Post Previous:Iikhosi ze-16 zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezineZatifikethi
Okulandelayo Post:Iindawo ezili-15 zokufumana uvavanyo lwesiNgesi ngeempendulo zePDF